Dawwannaan Prezdaanti Ameerikaa Obamaa biyyoota Afrikaa lamaanii ergaa ciccimoo if keessaa qaba jedhu -
Dawwannaan Prezdaanti Ameerikaa Obamaa biyyoota Afrikaa lamaanii ergaa ciccimoo if keessaa qaba jedhu
Pirezdaantii Obaamaa fi Buna Oromiyaa.
Daawwannaan Pirezdentin Ameerikaa Obaamaan Biyyoota Afrikaa Bahaa keeysaa murteeyssitoota tahan lama jechuun Keenyaa fi Toophiyaa keeysatti raawwata jiru ija siyaasaa fi diinaggeeyin wayta laalamu ergaa sadii ciccimo of keeysaa qaba.
1. Biyyi Chaayinaa qunnamtii Afrikaa waliin qabduu laalchisee suuta suuta qeenssa irraa ciruu, keeyssaafuu Toophiyaa fi Keeniyaa keeyssatti ol Aantummaan Ameerikaa qoftiin akka calaqqisu godhuu dandeyuu fi irratti hojjachu keeyssatti hirmaachuu biyya Ameerikaa agarsiisuf tattaafachuu .
Biyyoonni Afrikaa akka wali-galaatti biyya Ameerikaa waliin qunnamtii qaban gara diinaggeeyi fi siyaasaatiin ol guddisuu irratti hojjachuu yoo dandeyame Afrikaa fi Chaaynaa wal afaan kaayu.
2. Ajendaan Ameerikaa inni lammadaa biyya Misraa ykn Ejiiptii Afrikaa keeyssatti of deebisuuf tattaaffii hogganoottiin Misra godhaa jiran kana bakka dhabsiisuu fi hidhaa laga abbayyaa laalchisee hujii ijaarsa kanaaf Toophiyaa keeyssatti deemaa jiru deeggaruu fi dinqisiisachuu bira kuttee biyyi Ameerikaa akka hujii dhunfaa isiitti toohachaa jiraachuun isi kuni hegereen biyya Masrii harka Toophiyaatti galtee ajajni Kaayroo ittiin bultu Finfinnerraa bahuufi qaba ajendaa ja’utuu lafa kaayame xaxamaa jira. Daawwannaa Prezdaantii Obaamaa kanaan hujjitti hiikamuuf jiraata.
3. Ergaan Sadaffaa daawwannaan Prezdaanti Obaamaa tuni of keeyssa qabdu, biyyi Qatar maallaqa isiitiin biyyota Aftikaa gara garaa keeyssatti hujii daangaa hin qabne ofaa jirtu kuni fedhiifii ejjannaa biyya Ameerikaa waliin hin deemu taanaan qennsi shekkoota warra Qatar kan kukkutamuuf jiraatu tahuu itti himuu of keeyssa qaba daawwannaan Afrikaa Bahaatti Prezdaanti Obaamaan raawwataa jiru kuni.
Torbee Daawwannaan Prezdaanti Obaamaa kuni Keeniyaa fi Toophiyaa keeyssatti gad-geeyfamuuf qophiin xumuramaa jiru kanatti magaalaa mummitti biyya Sumaalee Mugdishoon Hoteelaa Al-Jaziiraa ja’amu keeyssatti dhoohinsa dhooheen hojjattoota embaasii Chaaynaa, embaasii Masrii fii embaasii Qatar irratti raawwatameen qabeenya embaasii sadeeni irraa midhaan guddaan geyuufii lammiin Chaaynaa tokkoos kan madaawee tahuun hubatamee jira.
Rukuttaan yeroo duraatiif hojjattoota embaasii yookin qusula Chaaynaa fi Masrii akkasuma, qusula Qatar irratti fudhatame kuni ergaa hedduu of keeyssaa qaba jechuu keeyssa beeytoonni fi hayyoonni dhimma Afrikaa fi Ameerikaa dubbachaa jiru.
Kana hunda caalaa hoggantoota Afrikaa Bahaa irraa Umer Al-Bashirillee dabalate iddoo Gola Tokkummaa Afrikaa keeyssatti Prezdaanti Obaamaa waliin wal Arganii wal-marihachaa turanitti Prezdaanti Masrii Abdul-fattaah Al-Sisiin sirnicha marii hoggantoota Afrikaa kana keeyssaa hanbisuun isaanii biyya Misraaf ergaa guddaa qaba.
Gaazexeyssaa fi xinxalaa
Previous Sakaallaan Moraa Qabsoo Bilisuummaa Oromoo Kessaa Cituutti Jira
Next Kitaaba seenaa nabi Muhammad (NRIHJ) fi kitaabaa Hadiisa Bukhaariin Afaan Oromootti hiikame